PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - ISIZOTHA KUGCOTSHWA UMFU LUNGILE LUTHULI
ISIZOTHA KUGCOTSHWA UMFU LUNGILE LUTHULI
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI
KUSHUBE umoya, kwacacela wonke umuntu ukuthi ubizo lobufundisi alusiyona into encane ngesikhathi sezifungo enkonzweni yokugcotshwa kwalowo phambilini obengumculi we- gospel ,umfu Lungile Luthuli, kwesokuba ngumphostoli enkonzweni ebiyenzelwe ebandleni aliholayo, ikingdom Life Ministries International, ekhoneni lemigwaqo upixley kaseme nomargareth Mcadi enkabeni yetheku ngomgqibelo odlule.
Isizotha senezelwe nawubuningi babefundisi abebezimazise le nkonzo, abanye kubona abebezokwenza umsebenzi wokugcotshwa kukamfu Luthuli.
Obengamele uhlelo lwesigaba sokugcoba bekungum bhihsobhi Mazwi Luthuli ophuma e-eastern Cape ngokomsebenzi wenkosi.
Umbhishobhi uchazele abazalwane ngenqubo yokugcotshelwa ububhishobhi ngokosiko nomlando we-episcopal College of Pentecostal Bishops e-united States of America futhi wabani- keza incazelo ngezivatho zobubhishobhi nesibeke obala isithombe ngobizo nobumqoka balo.
Ukuba phezulu kwezinga lamalungiselelo ale nkonzo kubonakele nangesikhathi sekhefu okudlalwe ngaso i- video lapho umfu Luthuli ebechaza khona ngempilo yakhe nangombono awuphathisiwe ngebandla aliholayo.
Kulo mbono kuvele ukuthi umfu Luthuli akagcini nje ngokunakekela abazalwane ngokomoya kepha ungumuntu okhathazekile nangenhlalo yomphakathi, ngisho nangabantu abangesiwona amalungu ebandla aliholayo. Yingakho nje phakathi kokunye elikwenzayo ibandla kunenkulisa lapho ojahidada bethola izisekelo zemfundo kamuva abazo hlangabezana nayo esikoleni.
Bekukhona nabaculi bowokholo abebezonandisa phakathi kwabo obekukhona nomalusi Mbokazi wodumo lweqembu Abanqobi kodwa osecula yedwa.
Umemezele ukuthi kunencwadi ayibhalayo, engempilo yakhe esakhula, ezophuma kungekudala.
Umfu Lungile Luthuli emukela isitifiketi (kwesokunxele) nangesikhathi sebemhalalisela ngemuva kokugcotshwa ngomgqibelo enkonzweni ebiyenzelwe ebandleni aliholayo, ikingdom Life Ministries International enkabeni yetheku.